दस वर्षीया बालिकाको पेटमा के भेटियो यस्तो ? - inaruwaonline.com
दस वर्षीया बालिकाको पेटमा के भेटियो यस्तो ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ २२, २०७४ समय: २:२१:५३
काठमाडौं । दस वर्षीया बालिकाको पेटबाट सात किलो तौलको ट्युमर निकालिएको छ । कान्ति बाल अस्पतालमा तीन घण्टा लामो शल्यक्रियापछि चिकित्सकहरूले प्यूठानकी शीला नेपालीको पेटबाट उक्त ट्युमर निकालेका हुन् । उक्त अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा आरपी चौधरीको नेतृत्वमा उक्त शल्यक्रिया सम्पन्न भएको थियो ।
शल्यक्रियापछि बालिकाको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । डा चौधरीका अनुसार नेपालीको पेटमा आठ महिनाको उमेरदेखि आस्वभाविक ट्युमर देखिन थालेको थियो । उक्त ट्युमर बढदै गए पनि आर्थिक अभावका कारण परिवारले अस्पताल लैजान सकेका थिएनन् ।
बच्चालाई सामान्य अवस्थामा पनि गाह्रो हुन थालेपछि एक सामाजिक संस्थाको सहयोगमा बालिकालाई उपचारका लागि कान्ति अस्पताल ल्याइएको थियो । कान्तिमा आउँदा ट्युमर बढेकै कारण पेटका महìवपूर्ण अङ्गलाई समेत थिचेकाले उनमा अन्य समस्यासमेत थपिँदै गएको पाइएको डा चौधरीले बताउनुभयो ।
उहाँले यस्तो ट्युमर संसारमा एक प्रतिशतलाई मात्रै हुनसक्ने भन्दै आफूले बालिकाको शल्यक्रिया गर्दा परिवारसँग शल्यक्रियाको क्रममा उच्च जोखिम हुनसक्ने भन्ने जानकारी दिएर मात्र शल्यक्रियाको गरेको जानकारी दिनुभयो ।अाजकाे गाेरखापत्रमा खबर छ ।